Deals at ICT.com.mm, the #1 Online Tech Retailer in Myanmar – Tagged "KMD"
TeamGroup PD400 (960GB) Aluminum External SSD - T8FED4960G0C108K266,300 K229,000-15%
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Capacity: 960GB Meticulous texture withawarm touch. Unique Navy blue appearance Compatible with Windows PCs, MAC OS, Android mobile phones laptops and desktops Water Repellent, dustproof...
TeamGroup PD400 (240GB) Aluminum External SSD - T8FED4240G0C108
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Capacity: 240GB Meticulous texture withawarm touch. Unique Navy blue appearance Compatible with Windows PCs, MAC OS, Android mobile phones laptops and desktops Water Repellent, dustproof...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Capacity: 480GB Meticulous texture withawarm touch. Unique Navy blue appearance Compatible with Windows PCs, MAC OS, Android mobile phones laptops and desktops Water Repellent, dustproof...
TeamGroup PD1000 Aluminum Alloy External SSD (512GB) - T8FED6512G0C108
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Interface: USB3.2 Gen2Capacity: 512GB Material: Aluminum Alloy Performance(R/W): up to 1000/900 MB/s Accessories: USB 3.2 Type-A to Type-C Cable, USB 3.2 Type-C to Type-C Cable...
NEC NP-V332XG Projector (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Item Code: PP0040005 Filter Free Design Horizontal & Veritcal Keystone 3D Ready, PC frame sequential at 120Hz Direct power on/off ECO Mode technology Closed captioning Virtual Remote...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Display Size: 23.6″ Resolution: 1920 x 1080 Contrast ratio: 1000:1 Response Time: 1ms(144Hz) Connector: HDMI(2), Display Port Item Code: PP0080008 Warranty:3years part & service and 1...
Dell G5 15 5505 Gaming Laptop Supernova Silver (R5-4600H) 512GB SSD-3
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: Dell G5 15 5505, AMDRyzen5 Product Code: SELEKG5AMD21056000 Processor: AMD Ryzen5 4600H (3.0GHz Up to4GHz)Mobile Processor with Radeon(TM) Graphics Memory: 8GB, 2x4GB, DDR4, 3200MHz...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: Dell G5 15 5505, AMDRyzen7 Product Code: SELEKG5AMD21056400 Processor: AMD Ryzen(TM)74800H(2.9 GHz Up to 4.2 GHz) Mobile Processor with Radeon(TM) Graphics Memory: 8GB, 2x4GB,...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: G7 15 – 7500 Processor: Intel Core i7-10750H (12MB Cache, up to 5.0 GHz,6cores Display: 15.6 inch FHD (1920 x 1080) 300 nits WVA...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: Inspiron G5 5000 Desktop (i9) Processor:Intel(R) Core(TM) i9-10900F processor(10-Core, 20M Cache, 2.8GHz to 5.2GHz) Memory: 32GB, 2x16GB, DDR4, 2933Mhz Hard Drive: 512GB M.2 PCIe NVMe SSD...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ MTM: 4Y50R20863 Item Code: AC0010024 Full-size mouse for better grip Wired USB connection High resolution at 1600 DPI Ambidextrous design Color: Black Connection Type: Wired via USB Cable Length/Type: 1.8...
Lenovo ThinkPad Essential Wireless Mouse (4X30M56888)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ MTM: 4X30M56888 Item Code: AC0010256 Color: Black Battery Life: Up to 12 months Connection Type: 2.4 GHz Wireless via Nano USB Weight: 60 g (0.13 lbs) Special Design Features: Ambidextrous design Mice Button:3(left...
Lenovo Essential Stereo Analog Headset (4XD0K25030)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ MTM:4XD0K25030 Item Code: AC0010422 Color: Black Connection Type: Analog Cable Length/Type: 1.2 m Weight: 0.11 kg (0.25 lbs) Driver:2x 30 mm Frequency Range: 20 Hz -...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Item Code: NB0750003 Processor: Intel Core i5-10210U Processor(6MB Cache, 1.6 GHz, up to 4.2GHz) Memory: 8GB DDR4 2666MHz Storage: 256GB m.2 PCIe NVMe OS: Windows 10 Pro...